လောင်စာဆီသုံးအင်ဂျင် ကားတွေရောင်းချမှုကို တားဆီးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အမေရိကရဲ့ တတိယမြောက်ပြည်နယ် ! – MyMedia Myanmar
လောင်စာဆီသုံးအင်ဂျင် ကားတွေရောင်းချမှုကို တားဆီးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အမေရိကရဲ့ တတိယမြောက်ပြည်နယ် !
အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်ကတော့ လာမယ့် ၂၀၃၅ ခုနှစ်မှာ Combustion Engine ပါဝင်တဲ့ သမားရိုးကျ ကားတွေရောင်းချမှုကို လုံးဝ တားမြစ်သွားတော့မယ် ဆိုပြီး တစ်ကမ္ဘာ လုံး သိအောင် ကြေညာထား ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဖြစ်တဲ့ Gavin Newsom ကတော့ Ford Mustang Mach-E အသစ် ရဲ့ Executive Order ကိုလည်း လက်မှတ်ထိုးပြီး အတည်ပြုထားခဲ့ပါပြီ။ တကယ်တော့ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခု လောက် ကို အဆိုပါ ပြည်နယ် ဟာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ ပက်သက်လို့ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင် ဆောင်ရွက် နေခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး EPA ရဲ့ စနစ်တွေကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကာ ကားထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ဘက်ကနေလည်း ကာ ကွယ် ပေးခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ အချိန်တွေက ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည် နယ်ရဲ့ တားမြစ်ကြေညာချက် ထွက်ရှိပြီး နောက်တစ် လ လောက် အကြာမှာ ပဲ အမေရိကရဲ့ နောက်ထပ် ပြည်နယ် တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ နယူးဂျာစီ ကလည်း လာမယ့် ၂၀၅၀ အမီ ကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှုကို ၈၀ ရာနှုန်း လောက်အထိ လျှော့ချ နိုင်မယ့် အစီအစဉ် တစ်ရပ်ကို ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ပြည်နယ် နှစ်ခုရဲ့ အစီအစဉ် တွေထဲမှာ နောက်ထပ် ပြည်နယ်တစ်ခုလည်း ပါဝင်လာပြီ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပြည် နယ်ကတော့ မန်ဆာချူးဆက် ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ဆာချူးဆက် ပြည်နယ် အနေနဲ့ကလည်း လာမယ့် ၂၀၃၅ ကစလို့ Gas စွမ်းအင်သုံး ကားတွေရောင်းချမှုကို လုံးဝတားမြစ်သွားတော့မယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Charlie Baker ကတော့ လာမယ့် ၂၀၅၀ မှာ ကာဗွန် ထုတ်လုပ်မှု လုံးဝလျှော့ချ နိုင်မယ့် အစီအစဉ် ကို ရေးဆွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပြီးခရီးသည်တင်ကားတွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုပါ လျှော့ချမယ့် အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင် ပါတယ်။ လက်ရှိ ပြည်နယ်တစ်ဝှမ်းက ယာဉ်တွေရဲ့ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု ၂၇ ရာခိုင်နှုန်း လောက်ဟာ အဆိုပါ ခရီးသည်တင် ကားတွေ ဆီကနေထုတ်လွှတ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး Light Duty ခရီးသည်တင် ကားတွေက အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။ အဆို ပါ အစီအစဉ် ရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက်ကတော့ လာမယ့် ၂၀၅၀ ရောက်ရင် Fossil-Fuel Emissions တွေကို လုံးဝ မရှိတော့တဲ့ အနေအထားအထိ ရောက်အောင် လျှော့ချသွားဖို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း လိုအပ်တဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အခြေခံ အဆောက်အဦတွေ တည်ဆောက် ဖန်တီးနေတာကလည်း ပြည့်စုံ လုနီးနီးတော့ ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Baker ရဲ့ အစီအစဉ် ထဲမှာတော့ အများပြည်သူ အဆင်ပြေပြေ အားသွင်း နိုင်ဖို့ အတွက် ကွန်ရက်တွေ ကိုပါ ထပ်မံ ချဲ့ထွင်သွားဖို့က အရေးတကြီး ပါဝင်နေတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ကိုယ်ပိုင် ဂိုဒေါင် မပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လျှပ်စစ်ကားပိုင်ရှင်တွေ အတွက်ကတော့ ဘယ်နေရာမှာမဆို ကားကို အားပြန်သွင်းနိုင်ဖို့ အတွက် အခက်အခဲမရှိ နိုင်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး Combustion Engine ပါဝင်တဲ့ သမားရိုးကျ ကားတွေ ရောင်းချမှုကို တားမြစ်တာက လာမယ့်နှစ်တွေ မှာလည်း ဆက်လက်ပြီး တိုးမြင့်လာဖို့ ရှိနေသေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ဖန်တီးနေရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း ကတော့ လျှပ်စစ် ကားတွေဟာ ကားကုမ္ပဏီရဲ့ အနာဂါတ် အတွက် ပယ်ချထားလို့ မရတဲ့ အရာတွေ ဆိုတာကို အဆို ပါ လူနေအထူထပ်ဆုံး ပြည်နယ်ကြီး ၃ ခုက လက်ခံထားလိုက်လို့ပါပဲ။ ဥပမာအားဖြင့် ကယ်လီ ဖိုးနီးယား ပြည်နယ် မှာ ရှိတဲ့ ခရီးသည်တင် ကားဈေးကွက်ရောင်းချရမှုဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ရဲ့ ၃၁.၂ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ယှဉ်ရင် ၄၄.၈ ရာနှုန်း လောက် အထိကို ရှိတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် အရေးကြီတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကတော့ အခုလို မျိုး မန်ဆာချုးဆက် ပြည်နယ်ရဲ့ တားမြစ်မှုကလည်း အခြားသော ပြည်နယ်နှစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား နဲ့ နယူးဂျာစီ ပြည်နယ်တို့လိုပဲ လက်ရှိ Gas စွမ်းအင်သုံး ကားပိုင်ဆိုင်ထားမှု အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်မလာ နိုင်သလို ကားအဟောင်း ဈေးကွက် အတွင်း ရောင်းချမှုတွေ ကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါ ဥပဒေ ကတော့ ကားအသစ် ရောင်းချမှု တွေကိုပဲ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တားမြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဆိုရင်လည်း အရွေးချယ်ခံ သမ္မတသစ် ဖြစ်သူ ဂျိုးဘိုင်ဒန်လည်း အခု လနှောင်းပိုင်းမှာ စတင် တာဝန်ယူတော့မှာ ဖြစ်တာကြောင့် အမေရိက ‌တစ်လွှား လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကား သုံးစွဲမှု တွေကို ပိုမို တိုးမြှင့်လာကြဖွယ်ရာ ရှိသလို Public နဲ့ Private ကဏ္ဍ တွေမှာပါ ပိုမို တိုးတက်လာနိုင်တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာ ရှိတဲ့ ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍမှာ တော့ အခြေခံကျတဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ဖြစ်လာအောင် အရင်ဆုံး လုပ်ဆောင် ရဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ အခြားသော အဓိက ကား ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Ford နဲ့ GM တို့ကလည်း ဒီ အစီအစဉ် အပေါ်မှာ အတူ ရှိနေကြတယ်ဆိုတာကို ပြသထား ပြီးဖြစ်သလို သမ္မတသစ် ဂျိုးဘိုင်ဒန် ရဲ့ အစီအစဉ် တွေမှာလည်း လိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့ အသင့်ရှိနေပြီ ဖြစ်တာကြောင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို အကောင်းဆုံး လုပ် ဆောင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့် နိုင်တော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post လောင်စာဆီသုံးအင်ဂျင် ကားတွေရောင်းချမှုကို တားဆီးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အမေရိကရဲ့ တတိယမြောက်ပြည်နယ် ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-05T20:39:54+06:30January 5th, 2021|MYCARS MYANMAR|